Yakanakisa Ruviri mativi mashandiro anoenderera echirimo metiresi FactoryPrice-Rayson | Rayson
Rayson muRayson Maindasitiri Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Main zvigadzirwa Zvakanakisa Ruviri mativi mashandiro anoenderera echirimo metiresi Firita-Rayson
Ichi chigadzirwa hachisi zvinhu chete zvinoiswa panzvimbo asi zvinonyatsopedzisa nzvimbo. - Akadaro mumwe wevatengi vedu.
Nzvimbo yekutanga: Guangdong, China (mainland)
Kusimba: Nyoro / Pakati / Zvakaoma
Trade izwi: EXW, FOB, CIF, Pasuo nesuo
Rudzi rwekambani: Fekitori, Kugadzira
Jira: jira rakarukwa
Kushanda: Imba, hotera, furati
Nguva yekubhadhara: TT / LC, 30% DIPOSITI YOKUBHADZWA PASI PAKUKUNDA, 70% KUSIMBIRA PAKUSANGANA NAMAOPI OKUTSVAGA MAGWARO PASI PEMAZUVA ANOSHANDA
Isu tinonyatsoteedzera yakajairwa mhando yekudzora maitiro kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana kana kupfuura vatengi vedu zvinotarisirwa. Uye zvakare, isu tinopa mushure-kutengesa masevhisi evatengi pasirese pasirese. Mushure memakore ekuvandudza, isu tasimbisa kwenguva refu kudyidzana hukama nevatengi vedu pasirese. Ndokumbirawo uve nechokwadi chekuti tine kodzero yekutengesa zvigadzirwa zvedu uye hapazove nekukuvara kwakaitika kune izvo zvakaunzwa zvinhu. Isu tinogamuchira nemoyo wese kubvunza kwako uye kufona. Nemitsara yakakwana yekugadzira uye vashandi vane ruzivo, Rayson anogona kuzvimiririra kugadzira, kugadzira, kugadzira, uye kuyedza zvigadzirwa zvese nenzira inoshanda.
Matiresi yako inofanira kugara kwenguva yakareba sei? Matiresi yega yega yakasiyana. Ukakanda husiku kana kumuka uchirwadziwa inguva yekuwana matiresi nyowani zvisinei nezera rayo. Isu tinokurudzira kutarisa mutemo wemutemo uye kutsiva angangoita makore masere ese. Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira? LC pakuona / neTT, 30% Deposi uye 70% chiyero chiri pamusoro pemakopi ezvinyorwa zvekutumira witinin mazuva manomwe ekushanda. Sei kuburitsa metiresi yakapetwa? 1.Pa katoni padenga rakatsetseka mukamuri rako rekurara, nyatso dhonza metiresi kunze woisa pamubhedha wako. 2.Chengera nekuchengetera bhegi rekunze nekero uone kuti usacheke ipurasitiki yakaipa mukati kana metiresi, usamhan'arira banga 3. Bvisa kunze kwemetiresi-yakavharwa pametiresi pamubhedha wako 4Chenjerera cheka bhegi repurasitiki pamwe nekutarisa sezvo machira achangotanga kuparara, Bvisa bhegi repurasitiki. 5. Bvumira maawa makumi maviri nemana kuti mateti yako nyowani iwedzere zvizere.
1.Flat yakamanikidzwa nehuni pallet
2.Roll kumusoro nekatoni kana kraft bepa